Catalog Templates | Creatives Online
Manana eCommerce ve ianao sa mila manolotra ny vokatrao amin'ny alàlan'ny katalaogy ianao nefa tsy hainao ny manamboatra azy? Fantatrao ve fa misy môdely ho an'ny katalaogy? Eny, izany no izy! Raha manana fivarotana an-tserasera ianao ary mila manolotra endrika matihanina satria te ho lasa mpaninjara ny vokatrao manokana any amin'ny magazay sy orinasa hafa eo an-toerana ianao, dia tsy maintsy mahazo katalaogy tsara izay mampiseho ny maha-matihanina anao.
Ahoana anefa no hanaovana izany? Avy hatrany? Tsia, hita ao amin'ny Internet ny môdely katalaogy. Ary izay no horesahina manaraka. Tsy vitan'ny hoe hilaza aminao ny antony maha-zava-dehibe ny fananana katalaogy tsara izahay, fa hanome anao loharanon-karena mba hahafahanao manao izany ao anatin'ny minitra na ora raha toa ka manana zavatra be dia be ianao.
1 Inona no atao hoe katalaogy, inona izany ary nahoana izy io no zava-dehibe?
2 Templates Catalog tsara indrindra
2.1 Katalaogy momba ny Architecture
2.2 Modely katalaogy ho an'ny vokatra
2.4 Modely katalaogy minimalista
2.5 Modely katalaogy ho an'ny portfolio
2.6 Modely vokatra generik
2.7 Bokikely vokatra fanangonana
2.8 Modely katalaogy ho an'ny mpaka sary, mpanao sary, mpanoratra
2.9 Modely katalaogy ho an'ny trano fisakafoanana
Inona no atao hoe katalaogy, inona izany ary nahoana izy io no zava-dehibe?
Ny katalaogy dia antontan-taratasy, izay mety ho ara-batana na virtoaly, izay ahitana andiana vokatra misy ny toetrany. Misy karazana katalaogy maro, manomboka amin'ireo izay manatsara ny sary ka "miditra amin'ny maso" ka hatramin'ny lisitry ny vokatra sy ny vidiny.
Ny tena fampiasana azy dia tena samihafa. Ohatra, ny katalaogy dia mety ho iray izay manana fivarotana enta-madinika ahafahanao manafatra vokatra mihoatra noho ny mahazatra, ary manolotra anao lisitry ny vokatra. Na mety ho kamiao mpitatitra sakafo (matetika mangatsiaka) izay mitondra katalaogy mba ahafahana manafatra azy araka ny laharan-tariby (na araka ny sary miaraka amin'ny vokatra).
Ny katalaogy foana dia ahitana vokatra voafantina izay hivarotany azy Ary izany dia zavatra mbola ao anatin'ny fironana satria fomba iray mampivondrona ny zavatra amidy (raha amin'ny fivarotana an-tserasera dia mamela ny mampifandray ny fivarotana vokatra amin'ny Internet amin'ny "ianao aminao").
Ankehitriny, nahoana no zava-dehibe ny katalaogy? Andeha isika haka ohatra. Alao sary an-tsaina hoe mpamorona sary ianao ary nanapa-kevitra ny hanokatra fivarotana iray miaraka amin'ny fanoharanao. Manana azy rehetra ao amin'ny Internet ianao, saingy tampoka teo ny fivarotana iray eo amin'ny manodidina anao dia nifandray taminao ary nangataka anao handefa azy ireo ny katalaogin'ny vokatrao satria te hahita izay rehetra anananao izy ireo. Te hilaza aminy ve ianao mba hiditra ao amin'ny pejy ary hivezivezy hahita izany? Tsy ho tena matihanina izany.
Amin'ny lafiny iray, raha manana katalaogin'ny vokatra ianao, izay ahitana ny vokatra sy ny vidiny, tsy heverinao ve fa tsara kokoa ny manolotra azy ireo? Amin'izany fomba izany dia omenao zavatra ara-batana azony jerena izy tsy mila Internet, finday na solosaina.
Ny maha zava-dehibe ny katalaogy dia ny fanaovana ny tsy azo tsapain-tanana "zavatra azo tsapain-tanana". Tsy afaka mandeha any amin'ny fivarotana miaraka amin'ny vokatra rehetra ianao, satria tsy hanana toerana ara-materialy ianao. Fa ny katalaogy dia manampy anao hanolotra santionany amin'ny zavatra rehetra azonao omena an'io orinasa io, miasa tena na olon-tsotra, mba hahafahan'izy ireo manapa-kevitra izay hovidina.
Templates Catalog tsara indrindra
Na mpamorona sary ianao, tompon'ny eCommerce, mpandraharaha, tsy miankina ..., Raha manana vokatra hamidy ianao dia mila katalaogin'izy ireo. Ary satria tsy tianay ny tsy maintsy manomboka hatrany am-boalohany ianao, ahoana ny amin'ny fanandramana ireo môdely katalaogy ireo?
Eto izahay dia nanangona ny fifantenana azy ireo.
Katalaogy momba ny Architecture
Eto izahay dia manolotra ny sasany maodely katalaogy maritrano, na dia azo ampiasaina amin'ny fanofana na fivarotana trano aza.
Na dia a priori aza dia heverinao fa miasa ho an'izany ihany izy, ny marina dia rehefa ao anaty ianao, araka izay azonao atao retouch, dia mahita fampiasana hafa foana ianao.
Modely katalaogy ho an'ny vokatra
Manana magazay ve ianao na nasaina nanao katalaogin'ny vokatra? Raha tokony hanomboka amin'ny scratch ianao, eto dia afaka manana templates catalog izay tsy maintsy ataonao ihany mametraka sary, manova famaritana, lohateny ary vidiny, ary ho vitanao haingana kokoa ny asa.
Raha lamaody ny asa tsy maintsy ataonao, na izay ataonao, dia misy iray izay, Na dia ny sary aza no zava-dehibe indrindra, misy toerana ho an'ny lahatsoratra ihany koa mba hanazavana na hametrahana vidiny aza.
Modely katalaogy minimalista
Amin'ity tranga ity dia manana katalaogy izay mandeha amin'izay mandeha ianao, asehoy ny vokatra. Na izany aza, izany no mitranga fanatsarana sary ankapobeny ary avy eo sary kely momba ny vokatra, miaraka amin'ny toetrany sy ny vidiny.
Modely katalaogy ho an'ny portfolio
Tadidinao ve ilay tranga noresahintsika teo aloha momba ny mpanao sary? Ny mahazatra dia manana portfolio misy endrika tsara indrindra ianao, fa ahoana raha manana fivarotana ianao? Eny, mila môdely katalaogy vitsivitsy ianao hanehoana izay amidinao.
eto misy ohatra an'izany, izay tadiavina izany Ataovy toy ny portfolio ary koa katalaogy, miaraka amin'ny sary avo lenta ary tena mora ovaina.
Modely vokatra generik
Raha manana vokatra maro generic ianao, na mampiasa sary mitovy nefa misy loko hafa, dia ity no modely tadiavinao.
Ao aminy voatanisa ny vokatra fa misy sary sy loko misy. Manana sary lehibe sy/na kely koa ianao eo anilany raha te-hampiseho ny havanana sy mivadika na ny lafiny roa amin'ny vokatra iray ianao.
Misintona azy avy amin'ny eto.
Bokikely vokatra fanangonana
Raha izay tadiavinao Tsy vitan'ny hoe mampiseho ny vokatra, fa manome votoaty ihany koa (eo amin'ny lamaody ny fitantarana ary mbola hitohy izany), dia tsy maintsy miloka amin'izany ianao.
Ity dia katalaogy mampiseho singa vitsivitsy, saingy mamela toerana malalaka ho an'ny lahatsoratra ary tsy manakorontana be loatra ny takelaka.
Modely katalaogy ho an'ny mpaka sary, mpanao sary, mpanoratra
Ity no iray amin'ireo lasitra katalaogy tena tiana ho an'ity vondrona ity, satria na dia misy sary aza no apetraka ao, dia ny lahatsoratra angamba no mitondra lanja indrindra. Ary na dia toa tsy izany aza, Ny fampiarahana sary misy teny misolo tena dia afaka mivarotra tsara kokoa.
Modely katalaogy ho an'ny trano fisakafoanana
Tsy maintsy manao katalaogy ho an'ny trano fisakafoanana ve ianao? Tsy misy azo atao intsony, eto ianao dia manana môdely afaka manompo anao, na manohina azy io hanompo anao.
azonao izany eto.
Araka ny hitanao dia misy safidy maro azo isafidianana amin'ireo maodely katalaogy. Mazava ho azy fa raha tsy hitanao ilay tadiavinao amin'ireo dia manoro hevitra anao izahay hijery an-tserasera satria misy safidy maro hafa mety ho azo ampiasaina. Te-hanolotra iray fampiasa be dia be ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Catalog Templates